Famarana mari-pana tsy mifandray | Shanghai Sunshine Technologies Co., Ltd.
Temperature ara-pahasalamana Mfanamorana
Noho ny fiantraikan'ny valanaretina dia nanjary ampahany amin'ny fiainana andavanandron'ny olona ny fandrefesana ny mari-pana. Noho ny tsy fifandraisany, ny valiny haingana ary ny fampiasana azy mora foana, ny thermometra infrareda dia be mpampiasa amin'ny vavahady fifamoivoizana, hopitaly, faritra onenana, orinasa ary andrim-panjakan'olo-tsotra. Ny fitaovana fandrefesana mari-pana amin'ny infrared mahazatra dia azo zaraina ho karazany roa: fitaovana fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny hafanana infrared ary thermometre infrared.
Ny fitaovana fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny hafanana tsy misy fotony dia azo ampiasaina amin'ny fanaraha-maso faritra lehibe amin'ny toerana ampahibemaso misy olona mikoriana. Afaka manara-maso sy manaitra ireo faritra maripana avo lenta izy, ary miara-miasa amin'ny horonantsary maivana hita maso mba hahitana sy hanarahana haingana ireo olona manana hafanan'ny vatana avo. Rehefa mampifandray ny fanekena ny tarehy, ny fizahana finday ary ny teknolojia hafa izy io, dia afaka mahafehy fampahalalana bebe kokoa momba ireo olona manana hafanan'ny vatana avo kokoa ihany koa.
Ny thermométer infrared dia azo zaraina ho thermometer sofina infrared sy thermometer amin'ny handrina infrared. Ny thermometer infrared dia manana tombony amin'ny fanamboarana tsotra, fampiasana mora ary valiny haingana, izay afaka mahatsapa ny fandrefesana sy ny mari-pana haingana amin'ny mpiasa.
Famarana ny maripana indostrialy
Ny toerana ifandraisan'ny sensor momba ny mari-pana nentim-paharazana dia mila apetraka eo ambonin'ny tanjona kendrena, noho izany dia mila mandinika ireo toetra ara-batana ananan'ny mpanelanelana hifandraisana, toy ny adhesion, ny harafesina, ny fitafiana sns, vokatr'izany ny sensor temperautre dia voafetra amin'ny habaka sy ny elakelam-pitsikilovana. Raha ny sensor infrared thermopile dia afaka mamantatra lasibatra lavitra sy ampiasaina amin'ny fotoana tsy azo idirana. Miaraka amin'ny toetran'ny mora entina, mety ny refesina, ary ny halaviran'ny mari-pana hita, ny sensor infrared thermopile dia ampiasaina betsaka amin'ny fikojakojana indostrialy mialoha sy fisorohana, ary efa be mpampiasa amin'ny fitadiavana herinaratra, indostria, petrochemical, fitaterana an-dalamby, fitehirizana angovo fiarovana ary saha hafa.